Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင် တသောင်းခန့်ရှိပြီး၊ အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် တသိန်းခန့်ရှိတယ်လို့ ထောက်လှမ်းရေးမှတ် တမ်းများမှာ ပါရှိပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကေဒါများကို ရွေးချယ်ရာမှာ တက္ကသိုလ်ဆရာများ၊ ဘာသာရေးကျောင်းမှ ကျောင်းသားများကို ဦးစားပေးရွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတောင်ပိုင်းဒေသမှာ အခြေစိုက်လှုပ်ရှားလေ့ရှိပြီး၊ တနိုင် ငံလုံးအနှံ့ ကွန်ယက်များ ဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီးကပ်တဲ့ စစ်တ ကောင်းနယ်အပါအဝင် ဒေသကိုးခုမှာ operation divisions ကိုးခုခွဲပြီး လှုပ်ရှားပါတယ်။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ခရိုင် ၆၄ ခုအနက် ၆၃ ခုမှာ ဗုံးအလုံး ၅ဝဝ ကို တနာရီအတွင်းပေါက်ကွဲအောင် ချိန်ကိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ မှု မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာရေးပညာရပ်မှာ Thrasymachan Justification for Terrorism ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံ ရေး၊ တော်လှန်ရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်နေသူတွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားအရ အကြမ်းဖက် မှုကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တာတွေ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူတာတွေကို လက်ခံစဉ်းစားလေ့ မရှိကြပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် လူအများကြားမှာ climate of fear ပျံ့နှံ့လာပြီး နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် political outrage ကို ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လဲ ယူဆထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြမ်းဖက် မှုကို ဆန့်ကျင်တာဟာ ဒီလို political outrage ဖန်တီးနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေကို နှောင့်နှေးအောင် လုပ်တာလို့ ထင် မြင်စွပ်စွဲတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို တွေးခေါ်ယူဆချက်တွေ၊ ထင်မြင်စွပ်စွဲမှုတွေဟာ Thrasymachan Justification အပေါ် မှာ သက်ဝင်ယုံကြည်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ဝင်ယုံကြည်မှုကနေတဆင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို မသိ ဘာသာ ထောက်ခံအားပေးသူတွေ ဖြစ်လာတတ်သလို၊ ကိုယ်တိုင်လဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်သူတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အ စည်းတွေဟာ ဒီလို Thrasymachan Justification for Terrorism ကနေ မြစ်ဖျားခံလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအပါအဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ လှုပ် ရှားမှုများကို သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်သလို၊ မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ Thrasymachan Justification for Terrorism သဘောတရားများ မပျံ့ပွားစေရေးကိုလဲ သတိပြုဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 04:08
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ . All Rights Reserved